Kismaayo News » Shacabka somaaliyeed iyo xabsiyada Kenya!!
Shacabka somaaliyeed iyo xabsiyada Kenya!!
AS.C dhamaan walaalaha muslimiinta ee soomalida ah waan salaamayaa gaar ahaan masuliyiinta webka.
Lagasoo bilaabo burburkii dowlada soomaliya ee 1990kii shacabka soomaaliyeed dhibaayooyin badan ayaa soo wajahay, ooy kamid yihiin qax iy barakac balaaran oo wadanka kadhacay, waxayna usoo qaxen shacbka dowladaha dariska ah sida Kenya, ethobia, nasiib maynan u yeelan soomlaaida xiligaa kadib inay helaan dowlad xoog leh islamarkaasna wadanka gacanta kuqabata kana ilaalisa cadwga iyo kuwa aanan umada larabin inay helaan dowladad sax ah, shacabkana kajoojisa tahriibka iyo dhibaatoyinka badan ee haysta.
Dowlada Kenya oo kamid ah meelaha ay usoo qaxeen soomaalida badankood, ayaa waayadaan isu badashay goob xasaasi ah islamarkaasna ay kadhacayaan qaraxyo isdabajoog ah, iyo dilal qorshaysan oo ay gaysanayaan gacmo aanan la ogayn heybtooda, ujeedaduna ay tahay in la istuso soomaalida dagan wadanka iyo dowlada Kenya, taas oo shacabkii soomalida ee daganaa wadanka u keentay dhibaato badan askarta Kenyana ay xabsiyada dhigaan soomali badan oo qaxooti ah.
Dhamaan waxaas oo dhan waxay imanayaan kadib markii ay gashay dowlada Kenya wadanka soomaaliya iyadoo baacsanaysa xarakada alshabaab oo dhib kuhaysay wadankooda sida ay sheegtay dowlada Kenya, gabi ahaan Kenya ayaa isu badashay goob dhibaatooyin iyo qulqulotooyin ay kajiraan mar walbo, iyadoo wali ay soo dhawdahay doorashadii wadanka oo ay kahartay un bilooyin aad u yar.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay ahyd markay dowlada kenya soo sartay qoraal ah in wadanka ay kabaxaan dhamaan soomalida aan haysan sharciga Kenya, islamarkaasna qaxooti kujooga wadanka, kadibna dowladu howgal balaaran ayay kabilwday xaafada islii ee magaalada Nairobi halkaas ooy ku xirxirtay boqolaal soomaali qaxooti ah, taas oo niyad jab balaaran kukeentay soomaalida dagan xaafada islii, intaas waxaa dheer dowlada Kenya in ay soomaalida dagan
xaafadaas ula dhaqmayso si bani adamnimada kabaxsan, dhamaan waxas oo dhan waa qayb kamid ah dhibaatooyinka haysta shacabka soomaaliyeed meel walba oo aduunka ka imd ah, maadaamo aynan jirin dowlad awood leh oo wadanka iyo shacbkaba hogaamisa dhibkana kadhowrta.
Waxaa wax aad looga naxo ah inaad aragto mararka qaar xaafada islii hooyo soomaaliyeed oo da.ah oo askari Kenyan ah uu xabsiga uwado!! Waxaan iswaydiiyaa mar walbo shacbkan ilaahay ma sidaan ayuu ugu talogalay mise faraj ayaaa iman doona oo xaalada way isbadali doontaa?!! Meel walbo ood eegto dunida waa kudhibataysanyahay shcabka soomaaliyeed hadaba maxaa keenay dhamaan waxaas oo dhan? Ila eeg walaal qodobadaan.
1-soomaalida oo ah dad islawayn islamarkaasna aanan u haysanba in wax uu kamaqanyahay.
2-dowlad oo qaarkood aynan aragba faa.idadeedana aynan garanayn, waxa wadanka qasayana ay u badanyihiin intii dhalatay burburkii dowlada kadib
3- qabiil iyo qabyaalad oo oo ah mida soomaali ladagtay godka dheerna ku riday
4- aqoon la.aan ama jahli haysta soomaalida.
Waxaan isleeyay waa qodobada soomali u keenay dhibaatooyinka badan ee haysta manta iyo dowlad la.aata kajirta wadank
By.kamaaludiin shekh maxamed carab.\_nairobi